Fardo adduunka Scythians: taranta iyo adeegsiga. | Fardaha Noti
Reer Scythians iyo taranka faraska
Scythians-ku waxay ahaayeen reer guuraa reer Iiraan ah oo ka soo dhaqaaqay wabiyada Eurasia intii lagu jiray qarnigii XNUMXaad ee miilaadiga ilaa iyo qarnigii XNUMXaad ee miilaadiga. Waa la tixgeliyey mid ka mid ah dadkii ugu horreeyay ee xeel dheeraada dagaalka fardaha, laakiin intaas kaliya maahan.
Daraasad la daabacay ku dhowaad laba sano ka hor by Sayniska, shaaca ka qaaday in Reer guuraagii reer Scythian ee xilligii birta ayaa horey ugu tababbaray taranka fardaha xulashada.
Miyaan ku dhex milmaynaa taariikhda reer Scythians ee ay fardaha la wadaageen?
Reer Scythians uma ayraysan nolol ama geeri la'aan fardo la'aan. Had iyo jeer waxay qurxin jireen dabolaha xoolahooda iyagoo ku xardha si ay ugu ekaadaan koox abeeso ah.
Adhijirrada reer Scythian waxay dhex mushaaxayeen jiingadaha Central Asia inta u dhaxaysa qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad ee miilaadiga. Waxay ku noolaayeen baaburyo ay teendhooyinku huwadeen. Kuwani Scythians waxay qaadeen taranka fardaha si ay u gaaraan xayawaan la jaanqaaday qaab nololeedkooda iyo dalabkooda.
1 Faras dhaqashada reer Scythians
2 Maxay Scythians u isticmaali jireen fardo?
3 Dagaalkii Scythian sidee ahaa?
Faras dhaqashada reer Scythians
Baarayaasha haraaga fardihii qabriyada dhabta ah ee reer Scythians-ka, oo ku jiray xaalad ilaalin wanaagsan. Tirada tijaabooyinka laga helay qabuuraha waa tiro badan yihiin, mid ka mid ah in ka badan 200 oo ka hartay fardo kala duwan ayaa laga helay.
Sida ku xusan qoraallada Herodotus ee ku saabsan cibaadada aaska Scythian, fardo ay ku deeqeen qabaa'illada isbahaysiga ayaa la sadqeeyey. Tani waxay qayb ahaan sharraxaysaa tiro badan oo tijaabooyin ah oo la helay iyo noocyo kala duwan. Inta badan isbarbar dhigyada qabriyadan ayaanay xidhiidh lahayn.
Tijaabooyinka DNA waxay muujinayaan a kala duwanaanta weyn ee lakabka oo waxaa ka mid ahaa fardihii reer Sitti; madow, xabadka, xabadka, kareemka iyo lakabyada midabbada leh.
Waxa kale oo la ogaaday in ma uusan qaadin isbeddellada mas'uulka ka ah kalluunka kale, in kasta oo ay jireen noocyo la xidhiidha silsiladda masaafada gaaban ee fardaha maanta. Shaki kuma jiro reer Scythians waxay qaddariyeen adkaysiga iyo xawaaraha fardahooda.
Faraskii ugu horreeyay ee gurijoogta ah ayaa ka soo degay dhowr xayawaan, in kasta oo kala duwanaanshuhu lumay waqti ka dib.
Xaqiiqda kale ee xiisaha leh ee la ogaaday ayaa ah in reer Scythians waxay dayactireen qaabdhismeedka daaqa ee dabiiciga ah ee fardaha halkii laga dooran lahaa shaqsiyaad kooban. Tani way ka duwan tahay maanta halka hal xero hal loo isticmaalo tiro badan oo iskutallaabyo ah taas oo keentay in ku dhowaad dhammaan fardaha maanta ay leeyihiin isla Y chromosome haplotype ficil ahaan.
Inta badan hiddo-wadaha la isticmaalay, guud ahaan 121, waxay tixraacayaan ciribta hore, taas oo waliba la jaanqaadaysa cabirka lafaha. Waxay ahaayeen fardo adag.
Sidaa darteed waxaan dhihi karnaa taas taranka farasku wuxuu bilaabmay ilaa 5.500 sano ka hor.
Maxay Scythians u isticmaali jireen fardo?
Daraasaduhu waxay tilmaamayaan in xayawaankan loo bartay hilibkooda cun oo caanahooda cab (sida ka muuqata sawirka guud ee maqaalka). Tani waxay muujineysaa xulasho gaar ah oo xayawaan ah oo ku kordhay muddada nuujinta, wax la helay iyada oo ay ugu wacan tahay daraasadaha hidda-socodka. Caanaha ka sokow waxay sameeyeen farmaajo iyo Koumiss, cabitaan khamri ah oo laga sameeyay yogurt.
Dhaqanka Scythian wuxuu xiriir dhow la lahaa dagaalka. Waxay ku qeexeen cadawgooda inay ahaayeen dagaalyahannadii ugu dhiig daadinta badnaa xilligan. Ay ahaayeen fardooley waaweyn iyo qaansoley cabsi badan oo fuulitaankeeda. Raggii gobta ahaa waxay sameeyeen fardooley caan ah, oo wata hubka ugu fiican iyo gabal-dhacyada horudhaca u noqon kara dayrarka fardooleyda mustaqbalka.
Dagaalkii Scythian sidee ahaa?
Ku dhowaad dhammaan ragga qaangaarka ah iyo dumar badan ayaa ka qaybgalay dagaalladii. Intooda badani waxay fuuleen faraska, iyagoo samaystay fardooley fudeed oo qaansoley ah., inta soo hartay waxay ka koobnaayeen ciidan lug ah oo ka kooban kuwa ugu liita iyo fardooley culus oo ka kooban amiirro iyo ilaaladiisa.
Ma jiro xog faahfaahsan ama la taaban karo oo laga hayo taatikada ay u adeegsadeen dagaalladii, laakiin waxaa iska cad in farduhu door muuqda ka ciyaareen iyaga.
Kaasi wuxuu ahaa muhiimadda in rag iyo dumar ayaa fardooley fardo ku watay surwaal si gaar ah loogu talagalay shaqadaas. Waxay horumariyeen sagxadda adag ee raacitaanka. Koorsooyinkaas waxay ka koobnaayeen seddex qaybood: mid hore oo ku xirnaa jirka faraska oo suuxiyay nabarrada qaybaha intiisa kale si looga fogaado in xayawaanka la waxyeeleeyo, nooc ka mid ah suufka; dushiisa, qaab lagu sameeyay geedaha deerada ama laamaha alwaax; Ugu dambeyntiina, kursiga, oo sidoo kale loo yaqaan 'padding' si looga fuulto fuulitaanka garaacista, waxaa laga sameeyay maqaar ido ama harag lagu xiray timo xayawaan ah
Jaranjarooyinku waxay ahaayeen kuwo caqli gal ah, wax kiciyana ma ay lahayn, laakiin wadayaashu wali waxay ku dheellitiran yihiin xayawaanka. Reer Scythians waxay fuuleen xirfad aad u faras faras waqtiyadii ay dadka reer Yurub xitaa aysan horumar ka sameynin koox fardooley ah oo dagaal ah. Tani waxay Sicytiyiinta siisay faa iido weyn dagaalo badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Fardo » Reer Scythians iyo taranka faraska
Fardaha Khamriga: taariikhdooda iyo dabaaldegooda
Tartanka La Zarzuela iyo taariikhdiisa